Shirkadaha diyaaradaha ee Mareykanka ma sii iibsan karaan qalabka ay dowladda federaalka kaabto ee Huawei iyo qalabka ZTE | Androidsis
Shirkadaha xambaara Mareykanka ma sii iibsan karaan qalabka ay dowladda federaalka kaabto ee Huawei iyo ZTE
Sida ay tabinayaan warbaahinta shisheeye, 22kii Nofeembar, Guddiga Isgaarsiinta Federaalka ee Mareykanka (FCC) wuxuu oggolaaday a go'aanka in wuxuu ka mamnuucayaa wadayaasha inay isticmaalaan lacagaha kaalmada federaalka si ay u iibsadaan qalabka Huawei iyo ZTE. Guddiga ayaa sidoo kale u codeeyay in laga dalbado hawl wadeenka Mareykanka ee ku lugta leh in labada shirkadood laga saaro oo laga beddelo shabakadda hadda jirta.
Tani waxay umuuqataa dharbaaxo culus oo soo food saartay labada shirkadood ee Shiinaha, laakiin waxaa macquul ah inay ka dhuuntaan. Huawei iyo ZTE waxay lahaan doonaan 30 maalmood si ay uga hortagaan magacaabista halista amniga qaranka. Haddii labada shirkadood ay diidaan, mamnuucitaanku wuxuu dhaqan gelayaa 120 maalmood kadib.
Wakiilka Geoffrey Starks ayaa yiri Ku beddelashada qalabka Huawei ee ZTE shabakadda miyiga Mareykanka ayaa ku kici kara ilaa $ 2 bilyan. Dhinaceeda, Huawei ma sugin waqti dheer si ay u muujiso ku qanacsanaanta arrintan iyo bishii Nofeembar 23 waxay soo saartay bayaan ay ku muujineyso ka soo horjeedka codka Guddiga Isgaarsiinta Federaalka ee Mareykanka (FCC) ee mamnuucaya hawlwadeennada inay u adeegsadaan lacagaha deeqaha federaalka soo iibso qalabka Huawei, adoo xoogga saaraya in go'aanka hay'adda uu ku saleysan yahay macluumaadka hal dhinac ah.
Huawei waxaa mamnuucay FCC
Tani waa bayaanka warbaahinta ee go'aanka Guddiga Isgaarsiinta Federaalka ee Mareykanka ee lagu mamnuucayo kaqeybgalka shirkadda Huawei ee barnaamijka deeqda federaalka:
“Shirkadda Huawei waxay ka soo horjeesatay codeynta Guddiga Isgaarsiinta Federaalka ee Mareykanka (FCC) si looga mamnuuco wadayaasha inay isticmaalaan lacagaha kaalmada federaalka si ay u iibsadaan qalabka Huawei. Go'aanka FCC wuxuu ku saleysan yahay macluumaad hal dhinac ah iyo fasiraadda khaldan ee sharciga Shiinaha. Maqnaanshaha caddaynta, Huawei waxaa loo tixgeliyaa inay khatar ku tahay amniga qaranka, kaliya ma aha ku xadgudubka mabaadi'da nidaamka sharciga, laakiin sidoo kale looga shakisan yahay ku xadgudubka sharciga.
Maalgelinta adeegyada guud ee FCC waxaa loo adeegsadaa ugu horreyn si loo hagaajiyo isgaarsiinta iyo adeegga ballaaran ee internetka ee miyiga iyo meelaha fogfog. Iyadoo aan la helin taageerada sanduuqan, qaar badan oo ka mid ah kuwa xambaara Mareykanka ee ku sugan meelaha fog fog ma awoodi doonaan inay sii wadaan inay ka helaan Huawei alaab iyo adeegyo tartan ah waxayna sii wadi doonaan inay bixiyaan adeegyo isgaarsiineed oo xawaare sare leh oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay xarumaha dadweynaha sida iskuulada, isbitaalada iyo maktabadaha. Tartanka ka socda suuqa (gaar ahaan shabakadaha 5G) wuu daciifin doonaa, macaamiisha caadiga ahna waa inay bixiyaan qiimo ka sarreeya adeegyada shabakadda.
FCC waa mid aad u cad oo ku saabsan ka mamnuucaya wadayaasha inay iibsadaan qalabka Huawei runtiina aysan hagaajinaynin xaalada amniga shabakada ee Maraykanka. Nabadgelyada shabakadda iyo ilaalinta asturnaanta isticmaalaha ayaa ah barnaamijyada ganacsiga ee ugu muhiimsan shirkadda Huawei. Tan iyo markii la aasaasay 30 sano ka hor, Huawei waxay aasaastay dhaqammo nabadgelyo shabakadeed dhammaad illaa dhammaad laga bilaabo istiraatiijiyadda, silsiladda saadka, cilmi baarista iyo horumarinta alaabada iyo xalka. Huawei wuxuu ka shaqeeyaa in ka badan 170 dal oo adduunka ah iyo gobolka marna ma dhicin dhacdo weyn oo xagga amniga ah; shirkaddu waxay kasbatay kalsooni iyadoo si buuxda u daboolaysa baahiyahaaga amniga ee shabakaddaada.
Huawei waxay ku boorisay FCC iyo Ajit Pai inay dib uga fiirsadaan go’aanka. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan xiriir la furno dowladda Mareykanka iyo siyaasad dejiyeyaasha si aan u helno xalal wax ku ool ah si loo ilaaliyo amniga shabakadda isgaarsiinta Mareykanka loona ilaaliyo danaha macaamiisha miyiga iyo meelaha fog fog ee Mareykanka. "
Mawqifka ZTE ee dhibaatadan cusub ee nasiib darrada ah lama caddeynin, laakiin waxaan hubnaa inaysan aad u faraxsanayn. Weli, waxaan rajeyneynaa inay ku xukumi doonto go'aanka FCC iyo, sida Huawei, u maareeyso inay gaarto heshiis aan saameyn ku yeelanayn horumarinta tiknoolajiyada isgaarsiinta Mareykanka iyo adduunkaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Shirkadaha xambaara Mareykanka ma sii iibsan karaan qalabka ay dowladda federaalka kaabto ee Huawei iyo ZTE
Haddii aad tahay isticmaale OnePlus, waxaa laga yaabaa inaad hesho emayllo spam ah oo ku mahadsan daadinta xogta badan
Huawei Nova 6 SE waxaa ku dhiirrigelin doona iPhone 11 Pro